Ọgwụ Ọgwụ - Hyperbaric Oxygen Treatment Chamber
Oxygen ọgwụ - Hyperbaric ọgwụgwọ HBOT
Home/Oxygen ọgwụ - Hyperbaric ọgwụgwọ HBOT
Oxygen ọgwụ - Hyperbaric ọgwụgwọ HBOTteknamfg2018-06-26T12:15:19+00:00
Ụdị Hyperbaric Ụlọ Ọgwụ nke Ọrịa.
Ụlọ Hyperbaric Monoplace
Ụlọ Hyperbaric Transportable
Ụlọ Hyperbaric Ọgwụgwọ
Ụlọ mmiri na-ekpuchi ọnụ
Tekna arụpụta Monoplace, Multiplace, Mobile, na Transportable Hyperbaric Ụlọ na nhazi dịgasị iche iche iji zute ihe ọ bụla ma ọ bụ ụgwọ a chọrọ.
A na-emepụta Ụlọ Hyperbaric Monoplace maka ịgwọ otu onye ọrịa n'otu oge. A na-eji ụlọ ọrụ 100% eme ihe na ụlọ ahụ. Onye ọrịa HBOT na-eku ume 100% oxygen n'okpuru nrụgide.
A na-emepụta Ụlọ Hyperbaric dị iche iche maka ịgwọ ọtụtụ ndị ọrịa n'oge. Ụlọ ahụ na-arụ ọrụ na Ụlọ Ọrụ Ahụike Medical. Ndị ọrịa HBOT na-eku 100% oxygen n'okpuru nrụgide site na usoro mkpuchi ma ọ bụ mkpuchi. Ụlọ Hyperbaric dịgasị iche na-achọ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrịa Na-ahụ Maka Ọkụ na Fọsh.
Ụlọ Hyperbaric dị iche iche na-enwekwa atụmatụ ndị ọzọ dị ka ọkụ fiber opic, usoro nkwurịta okwu na ntụrụndụ, na Units Control Control (ECU) maka nkasi obi.
mobile Hyperbaric oxygen A na - ewukarị ụlọ ndị Chamber na ụgbọala na-adọkpụ ahịa ma ọ bụ ngwongwo gwongworo. Ụlọ ndị na-anọchite anya igwe bụ nke a Ụlọ Igwe Hyperbaric dị iche iche na ihe niile eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ụlọ a na-etinye n'ime ụgbọala ma ọ bụ ụgbọala na-adọkpụ.
Transportable Ụlọ Hyperbaric A na-ewu ụlọ na ụlọ ndị nwere ọnụ. Ụlọ ndị a na-ebugharị na-agụnye Ụlọ Hyperbaric dịgasị iche iche na ihe niile eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ dị n'elu ụlọ.
Ngwongwo Hyperbaric nke Mpido 4000
Ngwongwo Hyperbaric nke Mpido 3200
Nlereanya 6000 SL Multicale Hyperbaric Chamber
Nlereanya 6000 DL Multiplace Hyperbaric Chamber
Nlereanya 7200 SL Multicale Hyperbaric Chamber
Nlereanya 7200 DL Multiplace Hyperbaric Chamber
Nlereanya 8400 DL Multiplace Hyperbaric Chamber
Ụlọ Igwe Hyperbaric dị ọtụtụ